I-Ac Fan, i-Ac Cooling Fan, i-Ec Fan, i-Dc Cooling Fan, i-Ac Axial Fan - Ishesha
Umunwe Wensimbi Unogada
Umunwe wePulasitiki Unogada
Amathuluzi Wezokwelapha Nenhlanzeko
SA22580-1 230V AC engenamandla Industrial Ventilat ...
2019 intengo wholesale 70mm Ec Fan - EC FAN SE17 ...
Ukusebenza High Fan Like Ac - SA18060 indust ...
Sizibophezele ekuthuthukiseni, ekukhiqizeni nasekuthengiseni ukusebenza okuphezulu, ikhwalithi ethembekile nemikhiqizo yamanani entengo yokuncintisana kuwo wonke amakhasimende ethu.
Imikhiqizo yethu isidlulile isitifiketi sokuphepha kwamazwe omhlaba ahlukahlukene emazweni nasezifundeni ezinjenge: UL, CUL, TUV, CE, CCC, IP55, ROHS, njll.
Njengamanje, kunezisebenzi ezingaphezu kuka-200, indawo yesitshalo ingamamitha-skwele angama-8,000, futhi amandla wokukhiqiza angaba ngu-6,000KPCS.
Okusheshayo kuhlala kulalela amakhasimende ayo ngentuthuko eqhubekayo, ukusungula, nokwenza imikhiqizo emisha.
I-Shenzhen Speedy Technology Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2003. Manje seyakhiwe ku-Building 6, Juntian Industrial Zone, eShahu Village, ePingshan Town, ePingshan New District, eShenzhen. Umkhiqizi womhlangano nomkhiqizo onendawo engaphezu kwamamitha-skwele ayi-10,000 nabasebenzi abangaphezu kwama-400.Ukuphathwa Kwenkampani kudlule isitifiketi se-ISO-9001 (2008) sokulawulwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba.
Le nkampani igxile kakhulu ekukhiqizeni abalandeli be-DC bokupholisa, abalandeli be-AC bokupholisa, nama-radiator ekhompyutha. Umkhiqizo ulungele izinsimbi, imishini nemishini, i-CPU yamakhompiyutha, amandla kagesi we-chassis kanye nekhadi lemidwebo elidinga ukushabalalisa ukushisa noma umoya omncane. Imikhiqizo isidlulile iRohs, i-CE, i-UL, i-CUL, i-TUV, i-FCC, i-CCC, i-CQC nezinye izitifiketi, futhi imikhiqizo ithunyelwa ekhaya nakwamanye amazwe.
Ukulawulwa kwekhwalithi nokuthuthukiswa komkhiqizo kuyisisekelo semodeli yebhizinisi likaSpeedy. Okusheshayo kuhlala kulalela amakhasimende ayo ngentuthuko eqhubekayo, ukusungula, nokwenza imikhiqizo emisha. Sihlale sikulungele ukunikeza izixazululo ezinhle kakhulu zokupholisa kuwo wonke amakhasimende.
Ukusetshenziswa kwemboni nokuhlukaniswa kwabalandeli bokupholisa kwezimboni
Kumele kuqashelwe ukuthi asikhulumi ngabalandeli bezimboni ngemikhiqizo eyenziwe (njengokupholisa nomoya omncane ...
Incazelo emfushane yomlandeli we-EC
Umlandeli we-EC ngumkhiqizo omusha embonini yabalandeli. Ihlukile kwabanye abalandeli beDC. Ayikwazi ukusebenzisa kuphela ukunikezwa kwamandla kagesi kwe-DC, kepha futhi ne-AC voltage p ...
Umehluko phakathi kwe-AC fan ne-DC fan
1. Isimiso esisebenzayo: Isimiso esisebenzayo se-DC yokupholisa fan: ngokusebenzisa i-DC voltage ne-elektrikhi yokungeniswa, amandla kagesi aguqulwa ...
IShenzhen Speedy Technology Co, Ltd.
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe - Ibalazwe
I-12cm Ac Axial Fan, Abalandeli Bepulasitiki, I-Hvac Fan Puller, I-Metal Grill Fan 80mm Guard, 172mm Ac Axial Umlandeli, I-Metal Fan Guard,